1 Mpanjaka 13 - Ny Baiboly
1 Mpanjaka toko 13
Fanozonana ny otely ao Betela - Olon'Andriamanitra tsy nanaiky ka matin'ny liona.
1Raha mbola nitoetra teo amin'ny otely handoro ny sorona Jeroboama, dia indro nisy olon'Andriamanitra avy any Jodà, tonga tany Betela, noho ny tenin'ny Tompo. 2Nanao antso nihatra tamin'ny otely izy io, noho ny tenin'ny Tompo, ka nanao hoe: Ry otely! Ry otely! Izao no lazain'ny Tompo: Hisy zaza lahy hateraka ho an'ny tranon'i Davida, ka ny anarany hatao hoe: Josiasa; ny mpisoron'ny fitoerana avo, izay mandoro ny sorona eo amboninao, no hovonoina hatao sorona eo amboninao; ary taolan'olona no hodorana eo amboninao! 3Androtr'izay ihany, dia nanome famantarana izy nanao hoe: Izao no famantarana fa Iaveh no niteny: Indro fa hitresaka ny otely ary hiely ny lavenona eo amboniny.
4Nony ren'i Jeroboama mpanjaka ny tenin'ity olon'Andriamanitra, niantso amin'ny otely tao Betela dia naninjitra ny tànany avy eo ambony otely izy, ka nanao hoe: Sambory ilay io. Kanjo maina tery ny tànany izay nahinjiny hanondro azy, ka tsy azony navonkina intsony. 5Ary nitresaka tokoa ny otely, sady niely ny lavenona avy eo amin'ny otely araka ny famantarana nomen'ity olon'Andriamanitra noho ny tenin'ny Tompo. 6Niteny ny mpanjaka ka nilaza tamin'ity olon'Andriamanitra hoe: Mampionona an'ny Tompo Andriamanitrao, ka mivavaha ho ahy mba hivonkonan'ny tànako hankatý amiko indray. Nampionona an'ny Tompo ity olon'Andriamanitra ka azon'ny mpanjaka navonkina hankany aminy ny tànany izay tonga toy ny taloha ihany indray. 7Ary hoy ny mpanjaka tamin'ity olon'Andriamanitra: Andeha hianao hiara-miditra amiko ao an-trano hahazo aina, dia mba hotolorako fanomezana koa. 8Fa hoy ity olon'Andriamanitra tamin'ny mpanjaka: Na dia homenao ny antsasaky ny tranonao aza aho, dia tsy hiara-miditra aminao, sady tsy hihina-mofo na hisotro rano amin'ity fitoerana ity aho, 9satria izao no didy nomena ahy tamin'ny tenin'ny Tompo: Aza mihina-mofo na misotro rano, ary aza ny làlana nalehanao no hiverenanao. 10Dia lasa izy ka làlan-kafa no nombany, fa tsy ny làlana nalehany ho any Betela no niverenany.
11Ary nisy kosa mpaminany antitra anankiray nonina tany Betela; ka tonga ny zanany namisavisa taminy ny zavatra rehetra nataon'ilay olon'Andriamanitra tao Betela androtriny; nambarany tamin-drainy koa ny teny nolazain-dralehilahy tamin'ny mpanjaka. 12Dia hoy ny rainy tamin'izy ireo: Aiza no làlana nalehany? Fa hitan'ireto zanany kosa ny làlana nomban'ilay olon'Andriamanitra izay tonga avy tany amin'i Jodà. 13Ka hoy indray izy tamin'ny zanany: Asio lasely ny ampondrako. Dia nasian'ireo lasely ny ampondrany ka nitaingenany. 14Lasa izy nanaraka ilay olon'Andriamanitra ka nahita azy nipetraka teo ambanin'ity terebinta, dia hoy izy taminy: Hianao va izany olon'Andriamanitra avy any Jodà izany? Ary hoy ny navalin-dralehilahy: Izaho no izy. 15Ka hoy ilay mpaminany: Andeha hiaraka amiko ho any an-trano, mba hihina-mofo kely. 16Fa hoy ny navaliny: Tsy azoko atao ny miara-miverina aminao, na miara-miditra aminao, tsy hiara-mihina-mofo na misotro rano aminao amin'ity fitoerana ity aho, 17satria izao no voalaza tamiko tamin'ny tenin'ny Tompo: Aza mihina-mofo any, na misotro rano any, ary aza ny làlana nombanao fony nandroso hianao no hiverenanao. 18Dia hoy izy taminy: Izaho koa anie mpaminany toa anao ihany, ary nisy anjely niteny tamiko, noho ny tenin'ny Tompo, nanao hoe: Ento miverina miaraka aminao ho any an-tranonao izy, mba hihina-mofo sy hisotro rano. Laingany anefa izany. 19Dia niara-niverina taminy ilay olon'Andriamanitra, ka nihina-mofo sy nisotro rano tao an-tranony.
20Mbola nipetraka teo amin'ny latabatra izy ireo, dia tonga tamin'ilay mpaminany nitondra azy niverina ny tenin'ny Tompo, 21ka niteny mafy tamin-dralehilahy avy any Jodà izy, nanao hoe: Izao no lazain'ny Tompo: Noho hianao nandà ny tenin'ny Tompo, ka tsy nitandrina ny didy nandidian'ny Tompo Andriamanitrao anao, 22ary noho hianao niverina, ka nihina-mofo sy nisotro rano tamin'ny toerana nandraràn'ny Tompo anao hoe: Aza mihina-mofo any, na misotro rano any, dia tsy hiditra am-pasan-drazana ny fatinao.
23Nony avy nihina-mofo sy nisotro izy, dia nasian'ilay mpaminany antitra lasely ny ampondrany mba ho azy, dia ho an'ity mpaminany naveriny. 24Rahefa lasa ilay olon'Andriamanitra dia nifanehatra tamin'ity liona anankiray, izay namono nahafaty azy. Raha mbola niampatra teo an-dàlana teo ny fatiny, dia nijanona teo anilany ilay ampondra, ary nipetraka teo akaikin'ny faty koa ilay liona. 25Ary indro fa nisy olona nandalo ka nahita ity faty niampatra teo an-dàlana sy ny liona nitoetra teo akaikin'ny faty, ka nilaza izany, nony tonga tao amin'ny tanàna nonenan'ilay mpaminany antitra izy ireo. 26Nony nandre izany ity mpaminany namerina ilay olon'Andriamanitra tany an-dàlana, dia hoy izy: Ilay olon'Andriamanitra nandà ny tenin'ny Tompo izay, fa natolotry ny Tompo ny liona izy, ka noviravirainy, sy nasiany ho faty, araka ny teny voalazan'ny Tompo taminy. 27Dia hoy izy tamin'ireo zanany: Asio lasely ny ampondra. Nony voaisin'ireo lasely ny ampondra, 28dia nandeha izy, ka nahita ity faty niampatra teo an-dàlana, mbamin'ny ampondra sy ny liona nijanona teo anilan'ny faty. Ny liona tsy nihinana ny faty, tsy namiravira ity ampondra. 29Noaingain'ilay mpaminany ny fatin'ilay olon'Andriamanitra, nataony teo ambonin'ny ampondrany, dia nentiny; ary niverina tany an-tanànany ity mpaminany antitra, hitomany sy handevina azy. 30Nataony tao amin'ny fasany ny faty, dia nitomanian'izy ireo izy, nataony hoe: Indrisy! ry rahalahiko! 31Nony avy nandevina azy izy, dia nanao tamin'ireto zanany hoe: Raha avy izay hahafatesako, dia aleveno amin'ny fasana ilevenan'ity olon'Andriamanitra ity aho, ka ataovy eo anilan'ny taolany ny taolako. 32Fa ho tanteraka tokoa ny teny nantsoiny, araka ny tenin'ny Tompo, mihatra amin'ny otely any Betela sy amin'ny tranon'ny fitoerana avo rehetra izay ao amin'ny tanànan'i Samaria.
33Taorian'izany zava-niseho izany, mbola tsy niala tamin'ny lalan-dratsiny ihany Jeroboama, fa mbola nanangana mpisoron'ny fitoerana avo, avy amin'ny vahoaka, ihany izy, ka na iza na iza tia izany, dia natokany ka tonga mpisoron'ny toerana avo izy. 34Nampisy fahotana momba ny tranon'i Jeroboama izany ka io no antony nandringanana sy namongorana azy teto ambonin'ny tany. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.4922 seconds